Natiijada doorashada madaxtinimo ee dalka Jabuti oo caawa la shaacinayo – STAR FM SOMALIA
Wararka ka iminaya Jamhuuriyada Jabuti ayaa sheegaya in si wanaagsan ay u dhacday doorashadii maanta ay isugu soo baxeen shacabka Jabuti.
Illaa 456 goobood ayaa dadka codadkoodu ay ka dhiibanayeen iyadoo dadku ay safaf dhaadheer ku jireen.
Dadweynaha isdiwaan galiyay 00 tiradoodu gareyso 180. 000 ayaa u kala codeynaya 6 musharax oo uu ka mid yahay madaxweynaha dalka Djibouti mudane Ismaciil Cumar Geele.
Madaxweyne Geelle iyo qaar ka mid ah madaxda Djibouti ayaa maanta waxa ay ka codeyeen xarunta dowladda hoose ee wadankaasi, waxana ay kahadlen dareenka ku aadan codayda.
Doorashada dalka Djibouti oo lagu wado in la soo gabagabeyo 6:00 pm maqribnimo ayaa la filayaa in isla caawaba lagu dhawaaqo natiijada codbixinta madaxtinimada dalka Djibouti.
Wasiirka Maaliyadda oo Baxreyn uga qeyb galay Shirka Wasiirada Maaliyadda Jaamacada Carabta